Kusetshenziswa kuphi amabombo we-groove ball ajulile?
Amabombo we-deep groove ball ayizinhlobo ezivame kakhulu zamabombo agingqekayo. Ibhola eliyisisekelo le-groove elijulile linendandatho yangaphandle, iringi yangaphakathi, iqoqo lamabhola wensimbi kanye neqoqo lamakheji. Kunezinhlobo ezimbili zamabombo we-groove ball, umugqa owodwa nomugqa ophindwe kabili. Isakhiwo sebhola le-groove elijulile ...
Uyini umehluko phakathi kwe-angular contact bearing kanye ne-groove ball ejulile equkethe isakhiwo nesicelo?
I-deep groove ball bearing ne-angular contact ball bearing ngamabheroli amele ukumela. Ngamandla okuphatha umthwalo osabalalayo nomthwalo we-axial bidirectional, zisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni eziningi. Zifanele izimo zokujikeleza kwejubane elikhulu nomsindo ophansi nokudlidliza. Uphawu ...